शिक्षक लाईसेन्स : भोली (भदौ २५ गते) अन्तिम दिन, सच्याउनुभयो त विवरण ?
२४ भदौ, काठमाडौँ । प्रवेशपत्रमा आफैंले विवरण सच्याउने म्याद बुधबार (भदौ २५ ) गते सकिदैंछ ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट गत जेठ २ गते प्रकाशित अध्यापन अनुमतिपत्रको विज्ञापन अनुसार दरखास्त फाराम भर्ने उम्मेद्वारहरुको प्रवेशपत्र भदौ २७ गतेबाट प्रिन्ट गर्न मिल्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।
२१ गतेदेखि नै प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न मिल्ने भनिए पनि कतिपय उम्मेद्वारले दरखास्त फाराम संशोधनका लागि निवेदन पठाइरहेकाले विवरण सच्याउनका लागि बुधबार (भदौ २५) सम्म म्याद थप गरेको थियो ।
आफूले भरेको विवरण के कस्तो छ हेर्ने र गलत विवरण भएमा आफैले सच्याउन आयोगले भदौ २५ गतेसम्म समय तोकेको छ ।
कसरी हेर्ने preview ?
TSC को online application मा गई ‘प्रवेशपत्र’ लेखिएको बटनमा click गरेर आफ्नो भौचरमा रहेको एप्लिकेशन आइ.डी. मा मोबाइल नम्बर Entry गरी preview हेर्न सकिनेछ । तर बैंकमा राजश्व रकम नबुझाउने उम्मेद्वारहरुको विवरण preview मा उपलब्ध हुने छैन ।
कस्ता विवरण आफैले संशोधन गर्न सकिन्छ :
देवनागरीमा नाम , ठेगाना, नागरिकता नम्बर,तीनपुस्ते विवरण , फोटो,र दस्तखत राख्ने,शैक्षिक योग्यता र तालिम) भदौ २५ गतेसम्म आफैंले सच्याउन सकिनेछ । यसका लागि आफ्नो User id Password म बाट Log in गर्नुपर्नेछ र सच्याउन सकिनेछ । ।
विज्ञापन नम्बर , तह र विषय सच्याउन परेमा बै.क भौचर र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र अङ्ग्रेजीमा नाम र जन्ममिति सच्याउन परेमा बैंक भोचर र नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी आयोगको इमेल [email protected] मा निवेदन पठाउनुपर्ने छ ।
केही उम्मेद्वारहरुको अनलाइन फाराम भर्न चाहेको जिल्ला छनोट नभएको वा जिल्ला खाली रहेको तथा कतिपय उम्मेद्वारहरुले परीक्षा दिन नपाइने विषयमा फाराम भरेको उम्मेद्वारले प्रकाशित विज्ञापनको शर्त बमोजिम जिल्लाको नाम भर्न र विषय परिवर्तनका लागि बैंक भौचर , ट्रान्सक्रिप्टसमेत राखी आयोगमा इमेलमार्फत निवेदन पठाउनुपर्नेछ ।
प्रवेशपत्र भदौ २७ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म प्रिन्ट गर्न सकिनेछ ।
आयोगमा विवरण सच्याउन निवेदन दिएकाहरुले भने असोज १ गतेपछि प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ ।